I-Tournament ye-Golf Tournament yaseSanderson (i-PGA Tour)
I-Sanderson Farms Championship yiPGA ye- golf ye-tournament edlalwa kwidolophu-dolophu yaseMississippi, ngokuqhelekileyo ekupheleni kuka-Oktobha okanye ekuqaleni koNovemba. Umqhudelwano osetyenziselwa ukuba "yintsimi echaseneyo" idlalwe kwiveki enye njengeBritish Open , kodwa yafudukela kwiNxalenye yokuwa kwe shedyuli eqala ngo-2014-15. Nangona kunjalo, kusekho intsebenzo yeentambo, ngoku idlalwa ngexesha elifanayo neWGC HSBC Champions.
Umqhubi wathatha igama layo langoku ngo-2013. Xa liqala ukujoyina i-PGA Tour, yaziwa ngokuba yiComposit Guaranty Classic. Amanye amagama omncinci ngeminyaka i-Southern Farm Bureau Classic, iViking Classic kunye ne-True South Classic.
Iinqwelo ezine ze-68 okanye i-Ryan Armor ephucukisiwe ngakumbi kwi-five-stroke. Izitya zagqitywa ngo-19-ngaphantsi kwe-269. UChesson Hadley wayengumgijimi ode. Kwakuyiyokuqala yokuphumelela kwePGA Tour ye-41 ubudala.
2016 i-Sanderson Farms Championship
UCody Gribble wakhwela ezintlanu kwiimbobo ezisibhozo zokugqibela, kuquka ezintathu zokugqibela, ukuphumelela ngemivimbo emine. KwiGribble, yinto yokuqala yokunqoba kwePGA Tour. I-Gribble yavula umdlalo nge-73, kodwa yalandelwa ngo-63. Emva koko yadutshulwa kuma-67-65 ngeveki ukugqiba ngo-20-ngaphantsi kwe-268. UGreg Owen, uLuka uLuka kunye noKris Kirk aboshwe kwindawo yesibini.
UPeter Malnati unqobile okokuqala ngqa kwi-PGA Tour, ebetha abagijimi bakaWilliam McGirt noDavid Toms ngepheno elinye.
Malnati udonsa 67 kwinqanaba lokugqibela ukugqiba ngo-18-phantsi kwe-270.
Iirekhodi zokuBala kwiiFundown Farms Championship
Izimbobo ezingama-72: 263 - Dan Halldorson, 1986
Izimbobo eziyi-18: 61 - Keith Clearwater, 1996
Iikholeji zeGalofu zeeFlanzi zeSanderson
Lo mdlalo udlalwe ku-Annandale Golf Club eMadison, Mississippi ukususela ngo-1994 ukuya ku-2013.
Kodwa ngo-2014, isiganeko sathunyelwa kwisikhulu-dolobha saloo nto, uJackson, kunye ne-Country Club yaseJackson. Ngaphambi kowe-1994, umdlalo wadlala kwiHattiesburg Country Club eHatsburgburg, eMisissippi, ubuyela ngo-1986, xa isiganeko sidibene nePGA Tour.
I-PGA Tour Sanderson IiFama zeMidlalo kunye neNqaku
Umqhubi waba khona ngaphambi kowe-1986 (njengeMagnolia State Classic), kodwa ayengenxalenye yePGA Tour. Ngomnyaka we-1986, igama lalo litshintshelwe kwiDistim Guaranty Classic, kwaye yaba "intambo ye-satellite" yePGA Tour. Oku kuthetha ukuba umvuzo wabadlali babala kwi-PGA Uhlu lwemali yokuTyelela, kodwa abaphumeleleyo abazange baxelelwe ngokuphumelela kwe-PGA Tour.
Ukususela ngo-1994, umdlalo waba ngumqhubi we-PGA Tour ngokugcwele, kunye neentlawulo zokubala njengegosa.
Abaphumeleleyo ngaphambi kowe-1986, ngaphambi kokuba nayiphi na inxaxheba kunye nePGA Tour, yayiquka uCraig Stadler (1978), uRoger Maltbie (1980) kunye no- Payne Stewart (1982).
Ukuphumelela kokuqala kukaLuke Donald kwi-PGA Tour yayise-Southern Farm Bureau Classic ka-2002, eyancinciweyo kwimigodi engama-54 ngenxa yemozulu.
Izihlandlo ezine kwimbali yesiganeko kuye kwacutshulwa ukusuka kwiingxobo ezingama-72 ngenxa yemozulu. Oko kubandakanya u-1994, xa uBrian Henninger ephumelele emigodini engama-36 kuphela, unyaka wokuqala lo mqhubi wawuyi-PGA Tour.
UHenninger waba ngumqhubi wokuqala wexesha eli-2 kwi-PGA Tour ye minyaka ye-Tour ngokuphindayo kwakhona ngo-1999. Ukunqoba, kwakhona, kwakuncwatyelwa imozulu (izimbobo ezingama-54).
Abaphumeleleyo kwi-Championship Farms Championship
I-Sanderson Farms Championship
2017 - URyan Armor, 269
2016 - uCody Gribble, 268
2015 - UPeter Malnati, 270
2014 - uNick Taylor, 272
South Classic yangempela
2010 - iBhili-mali, 273
2009 - ayidlala
2008 - Ngaba iMacKenzie-p, 269
2005 - UHeath Slocum, 267
2004 - uFred Funk, 266
2003 - uJohan Huston, 268
2002 - uLuka Donald-w, ngo-201
2001 - uCameron Beckman, 269
Ngo-1999 - uBrian Henninger-w, 202
I-Deposit Guaranty Golf Classic
1998 - uFred Funk, 270
Ngo-1997 - uBilly Ray Brown, 271
1996 - uWillie Wood, 268
1994 - UBrian Henninger-w, 135
(Qaphela: Ngaphambi kowe-1994 abaphumeleleyo abazange baxhomekeke kukunqoba kwe-PGA Tour, nangona impumelelo yabo kulo mqhudelwano ibalekele uluhlu lwemali yokutyelela.)
Ngo-1993 - uGreg Kraft, 267
1992 - uRichard Zokol, 267
Ngo-1991 - uLarry Silveira-p, 266
1990 - iGene Sauers, 268
1989 - uJim Booros-w, 199
Ngo-1988 - uFrank Conner, 267
1987 - UDavid Ogrin, 267
Ngo-1986 - uDan Halldorson, 263
1974 I-US Vula: 'I-Massacre eWinged Foot'
I-WWE yeHolo yeFame yeSiqendu ka-2016
I-Transatlantic Trade Slave: 5 Iinkcukacha NgoBakhoboka eMerika
Abameli beeNyuvesi zeeRider
4 UkuCoca iClassroom Icebreakers
Iiprogram ezi-3 ezona zichanekileyo zemozulu